လူမုန်းခံတော့မည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Politics, Issues » လူမုန်းခံတော့မည်	37
Posted by Courage on Mar 13, 2015 in Politics, Issues | 37 comments
ကျွန်တော့ ဘ၀မှာ အကြောက်ဆုံး အရာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ လူမုန်းခံရမှာကိုပါ။ ဒါကြောင့်လဲ ကျွန်တော်ဟာ အလွန်တရာမှ အငြင်းသန်သူဖြစ်ပေမယ့် လူတွေနဲ့ အတိုက်အခံဖြစ်စေမယ့် ၀ိဝါဒ ကွဲပြားမှုအခြေခံကာ အမုန်းတရားတွေဖြစ်စေမယ့် စကားတွေကို ပြောဖို့အတွက် အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားခဲ့သူပါ။ ဒီအတွက်ကြောင့် နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ၀င်ရောက်ပြောဆိုခြင်း မပြုခဲ့တာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ကျွန်တော် လူမုန်းပဲခံပါတော့မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ခြမ်းကိုမှ မလိုက်ပဲ ခြံစည်းရိုးကိုခွထိုင်ပါတော့မယ်။ မြင်သမျှကို ကြားလူအနေနဲ့ ပြောမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ဖက်စလုံးက ကျွန်တော့ကို မုန်းကြပါတော့မယ်။ မုန်းကြပါစေတော့။ မုန်းကြပါတော့။
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစာသားလေးတစ်ကြောင်းရှိပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ တွေ့ခဲ့တာပါ။ ဘယ်သူရေးမှန်းတော့ မသိ။ “ ကိုက်တတ်တဲ့ခွေးမှန်းသိနေရက်နဲ့ မကိုက်ကိုက်အောင် ခွေးရှေ့သွား မျက်စိနောက်နေမှတော့ အကိုက်ခံရမှာပေါ့”တဲ့။ ကောင်းလိုက်တဲ့စာသားလေး။ ဟုတ်ပါတယ် အဲ့ခွေးက ကိုက်တတ်ပါတယ်။ မယုံမရှိပါနဲ့။ လူတို့ တမျိုးလုံးက ခေတ်အဆက်ဆက် ကိုက်ခဲ့တာပါ။ အခုလဲ ကိုက်လိုက်ပါပြီ။ ဒါမဲ့ ဒီတခါက ဒါဏ်ရာ အနည်းဆုံးပါ။
“ကျွန်တော့ အနေနဲ့ မတ်လ ၅ရက် ၂၀၁၅ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားများဦးဆောင်သည့် ဆန္ဒပြသူများအပေါ် တာဝန်ဆိုသည့် အနီရောင် လက်ပတ်ဝတ်ဆင်ထားသူများမှ ၀င်ရောက် အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခြင်းအား ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ပါသည်။ ထိုလုပ်ရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ အားလုံးကိုလဲ ရှုံ့ချပါသည်။
တာဝန်ရှိသူများမှ ဥပဒေနှင့်အညီလုပ်ဆောင်သည်ဟု မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဒါဟာ ပြည်သူအချင်းချင်း ရန်တိုက်ပေးခြင်းသာဖြစ်သဖြင့် အလွန်တရာမှ ရှက်စရာကောင်းသောလုပ်ရပ်ဟုဆိုပါမည်”။
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်သော သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ ပညာရေးဥပဒေဆိုင်ရာ အချက် ၁၁ချက်ထဲမှာ ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့အချက်တွေရှိသလို နားမလည်တာတွေလဲရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်ရှိအခြေအနေဖြင့် သိပ်ပြီးမလိုအပ်သေးဘူးလို့ မြင်တာလဲရှိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သော ကျောင်းသားများ ကောင်းစားဖို့ဆိုသည့် တစ်ချက်ထဲနဲ့ပင် ကျွန်တော် သူတို့ကို ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အခွင့်အရေးများရရင် ကိုယ်တိုင်တောင် ၀င်ရောက်ဆင်နွဲလိုက်ချင်သေး။ သေချာတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြန်မြန်မြင်ချင်ရင် ပညာရေးကို အမြန်ဆုံး အဆင့်မြှင့်သင့်နေပြီလေ။
ဒီ အချက် ၁၁ချက်ထဲမှာ အဓိက တောင်းဆိုလိုတာဟာ “ကျောင်းသာသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းခွင့် ရရှိရေး”ပဲဖြစ်မှာပါ။ ဖြစ်လဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ တကယ်ကို ကျောင်းသားအရေးကို လုပ်ဆောင်နိုင်သူများဖြင့် ကျောင်းသားအကျိုးကို ဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ပြန်လည်ရှိသင့်နေပါပြီ။ သမဂ္ဂအမည်ခံကာ မိမိလက်ခုတ်ထဲကရေများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲအစည်းမဟုတ်ပဲ တစ်ကယ့် ကိုယ်စလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းရှိသင့်နေပါပြီ။ သို့ပေမယ့် နောက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ကျောင်းများဖြစ်ရေးဆိုတာကတော့ နည်းနည်းစောနေသေးသလားလို့။ အဲ့ဒီ့အချက်အောက်မှာ ကျောင်းသားတွေဟာ ကျောင်းရဲ့ အုပ်ချုပ်ခွင့် အထူးသဖြင့် ဆရာ ဆရာများရဲ့ အပြောင်းအရွေ့ကိစ္စတွေကိုပါ စီမံခွင့် ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်နည်းနည်း ဘ၀င်မကျပါ။ ဆရာကြီး အလင်္ကာကျော်စွာ ဦးဘဂျမ်းရဲ့ ကာတွန်းလေးတောင် သွားသတိရသေး။
ကျောင်းသားအရေးကို စောင့်ကြည့်နေရင်းခဲ့ရာ သပိတ်စစ်ကြောင်းကို တားဆီးမှုတွေ အကြိမ်ကြိမ်ရှိခဲ့ပေမယ့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနဲ့ ကောင်းမွန်သောရလဒ်များဖြင့် စစ်ကြောင်းဆက်လက်ချီတတ်ခွင့်ရခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျောင်းသားများတောင်းဆိုထားသော လေးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲမှတဆင့် မူအားဖြင့် သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါပြီ။ အစိုးရအနေဖြင့် မည်သည့်ချက်ကိုမှ ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုပဲ အကြွင်းမဲ သဘောတူခဲ့ခြင်းပါ။ ကျောင်းသားတို့ အောင်မြင်သွားခဲ့ပါပြီ။ မိမိတို့ရဲ့ ဆန္ဒကို စည်းလုံးမှုဖြင့် ရဲရင့်စွာတောင်းဆိုမှုရဲ့ ရလဒ်ဟာ အောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။
ဒီနောက်မှာ ဆက်ကြားမိတာကတော့ စစ်ကြောင်းဟာ မရပ်နားသေးပါ ဥပဒေပြုပြီးမှ ရပ်နားမည်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော် နည်းနည်း စဉ်းစားမိသွားပါပြီ။ ဥပဒေတစ်ခု ပြုရေးမှာ မလွယ်ကူပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် ပြည်မြို့မှ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို ပြောခဲ့သလို “လွှတ်တော်တွင် ဥပဒေတစ်ခုပြုရန်မှာ အကြိမ်ကြိမ် ဆွေးနွေးပြီးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်ကာလ တစ်ခုတော့ကြာနိုင်တယ်” လို့ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ဒီနေ့တင် ဒီနေ့အတည်ပြုဆိုတာ ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ခဲ့တဲ့ အာဏာရှင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်မှာ ထားခဲ့သင့်ပါပြီ။ ကိုယ်စလှယ်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေးပြီး အကောင်းဆုံး ရလဒ်ကို ရနိုင်မယ့် အချိန်ကို စောင့်ကြည့်သင့်ပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ စစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများထံမှ စကားထွက်လာပါတယ်။ “ရန်ကုန်ထိရောက်အောင် ချီတတ်ပါမယ်၊ ရန်ကုန်မြို့မှာ အောင်ပွဲခံပါမယ်။ ပြီးရင်သပိတ်ရပ်မယ်။ ဥပဒေပြုရေးကို စောင့်ကြည့်မယ်” ဆိုတာပါ။ အစိုးရကလဲ စစ်ကြောင်းကို ရန်ကုန်သို့ အ၀င်မခံပါဆိုပြီး ချော့တမျိုး ချောက်တဖုံနဲ့ သတိတွေပေးလာပါပြီ။ ကျောင်းသားတွေကို လက်ပတန်းမှာ ရဲအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ ပိတ်စို့တားဆီးထားလိုက်ပြီ။ ကျောင်းသားများကလဲ စစ်ကြောင်းကို ခေတ္တရပ်နားကာ ဆက်လက်ချီတတ်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုပေးဖို့ အစိုးရကို တွန်းအားပေးနေပါပြီ။ ဒီနေရာရောက်တော့ ကျွန်တော် တော်တော်ကို စဉ်းစားခဲ့ပါပြီ။
“ငါတို့အစိုးရက ကျောင်းသားတွေ တောင်းဆိုသမျှကို လိုက်လျောနေရလောက်အောင် သဘောထားကြီးလို့လား”။
ကျွန်တော် ၈၈၈၈ကို မမှီခဲ့ပါ။ ကျွန်တော် မှီခဲ့သလောက်တော့ အခုလူတွေပြောနေတဲ့ အ၀တ်လဲအစိုးရဆိုတာဟာ ဒီပဲရင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အစတောင်ရှာမရအောင်ကြံစီခဲ့သူ၊ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ သံဃာတွေကို သွေးမြေကျအောင်လုပ်ခဲ့သူ၊ လက်ပတောင်းမှာ သံဃာတွေကို မီးသင်္ကန်းကပ်ခဲ့တဲ့သူ၊ သပိတ်စခန်းပေါင်းများစွာကို တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ ခြေမှုန်းနေသူတွေပါ။ အခု ဒီလူတွေက ဒီမိုကရေစီခေတ်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး သပိတ်လို့ ဆိုရမယ့် ဒီကျောင်းသား သပိတ်နဲ့ ပတ်သက်ကာ အစစ လိုက်လျောနေတာ တွေ့ရတော့ ကျွန်တော သံသယတွေဝင်လာပါတယ်။ ကျွန်တော် သိသလောက်တော့ “မင်းတို့လဲ တောင်းချင်ရာတောင်း ငါတို့လဲ ပေးချင်မှပေးမယ်။ အေး ဒါပေမယ့် လမ်းပေါ်ထွက်လာရင် ဖမ်းမှာပဲ” ဆိုတဲ့ဒီလူတွေက ကျောင်းသားတွေကိုတော့ အလိုလိုက်နေပါတယ်။ ဒါဟာ ကျောင်းသားထုရဲ့ နောက်မှာ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ပါလာနိုင်တယ်ဆိုတာသိနေလို့။ သူတို့ကို အကြမ်းဖက်ခဲ့ရင် ပြည်သူရဲ့ ပေါက်ကွဲမှု ပါလာနိုင်တယ်ဆိုတာ သိနေတဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ အမြင်မျိုးစုံနဲ့ သဘောထားမျိုးစုံနဲ့ လူတန်းစားမျိုးစုံရှိတဲ့ ဆူလွယ် နှတ်လွယ် ရန်ကုန်မြို့ကို အ၀င်မခံပဲ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ ဝေးနိုင်သမျှ အဝေးဆုံးနေရာမှာ စစ်ကြောင်းကိုပြီးဆုံး စေရန် တောင်းဆိုချက်တွေကို လိုက်လျောခဲ့တာလို့ ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျောင်းသားတွေမဟုတ်ပဲ အခြားသူများဆို အဲ့စစ်ကြောင်း တစ်ပတ်တောင် မခံဘူး။ ဖြိုခွင်းခံရမှာသေချာတယ်။
ကျွန်တော်ထပ်ပြီး စဉ်းစားမိတယ်။ ကျောင်းသားတွေ လမ်းပေါ်ရောက်လာတာဟာ ဥပဒေပြဌာန်းရေးကြောင့်ပါ။ မန္တလေးကနေ ရန်ကုန်ကို ချီတတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါမဲ့ အခု ဦးတည်ချက် နည်းနည်းပြောင်းနေပြီ။ ဥပဒေပြုရေး သဘောတူညီချက်ရပြီးနောက် ရန်ကုန်ရောက်ရေးဆိုတာပါလာပြီ။ ဥပဒေပြုရေး တောင်းဆိုတဲ့သူတွေက ရန်ကုန်ရောက်ရေးအတွက်ဖြစ်လာပြီ။ ကျွန်တော် တစ်ခုပြောပါရစေ။ ကလေးတစ်ယော်က သူပူစာတဲ့ အရုပ်ကို မိဘက ၀ယ်ပေးပြီးချိန် ရေခဲမုန့်ဆိုင်နားသွားကာ စားချင်တယ် စားချင်တယ်နဲ့ ငိုယို နေသလို ဖြစ်နေပြီလား။ ကလေးတွေကတော့ မိဘရဲ့ အရိပ်အကဲမသိမကြည့်ဘဲ အလိုက်ကန်းဆိုးမသိစွာ ပူစာမှာပေါ့။ ဒါမဲ့ လူကြီးတွေ အနေနဲ့တော့…။
ကျွန်တော် တစ်ခုမေးချင်တယ်။ ဒီသပိတ်စစ်ကြောင်း ရန်ကုန်ကို ရောက်ကို ရောက်ဖို့ လိုအပ်လို့လား။ အာဏာပိုင်တွေက တူးတူးခါးခါး ငြင်းဆန် တားမြင့်နေတဲ့ကြားက ဘာကြောင့်မို့ သွားချင်နေတာလဲ။ တောင်းဆိုတားတဲ့ ဥပဒေကို ပြဌာန်းပေးဖို့ လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးတော့မယ်။ ကိုယ်တွေက အသာလေး ထိုင်ကြည့်ပြီး သူတို့မဟုတ်တာမလုပ်အောင် တွန်းအားပေးနေရုံပဲလေ။ ဘာကြောင့် ရန်ကုန်ကို သွားရမှာလဲ။ ဒီအချိန်မှာ ထပ်ကြားမိတယ်။ “ပြည်သူတွေ လာပါ။ အလုပ်သမားတွေ လာပူးပေါင်းပါ” တဲ့။ ဟာ…။ ဘာတွေလဲ။ ဒါဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် သပိတ်မှောက်တာ မဟုတ်တော့ဘူး။ အထွေထွေ သပိတ်ကို ဦးတည်နေတာ။ အစိုးရကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ တိုက်ခိုက်နေတာ။ ဒါ ကျွန်တော့အမြင်။ ဆက်ပြောမယ်။ ကျွန်တော် ကြားဖူး ဖတ်ဖူး မှတ်ဖူးခဲ့တဲ့ ၈၈၈၈ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ဒီကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု လုံးဝမတူဘူး။ ၈၈က အာဏာရှင် စနစ်ကို တွန်းလှမ်ဖို့ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဖြစ်ခဲ့တာ။ အသွင်လဲ မတူဘူး။ အဓိပ္ပါယ်လဲမတူဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါကို မတူတူအောင် လုပ်ယူနေတယ်လို့ ကျွန်တော် မြင်လာတယ်။
မပြေလယ်မှုတွေစတင်လာခဲ့ပါပြီ။ ရန်ကုန်ကို လုံးဝအ၀င်မခံဘူးဆိုတဲ့သူနဲ့ ရန်ကုန်မှ ရန်ကုန် ရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ သူတွေကြား ဖွဲမီးကစလာပြီ။ ဒေသအသီးသီးမှာ “ကျောင်းသားတွေကို ၀န်းရံကျ”ဆိုတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ မတ်လ ၅ရက်နေ့မှာတော့ ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ ကျောင်းသားတွေ အကြမ်းဖက်ခံလိုက်ရပြီ။ ဒီနေရာမှာ အသားထဲကလောက်ထွက်တဲ့ ရွံ့စရာလူတွေကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့လိုက်ရတယ်။ တာဝန်ဆိုပြီး စားထားတဲ့ ကျားရိုးအရှိန်နဲ့ မြင်မြင်ရာလိုက် ကိုက်တဲ့ အကောင်တွေကို။
နောက်ဆုံးမှာ ကျောင်းသားတွေဘက်က ရန်ကုန်ကို ဆက်သွားဖို့အတွက် တောင်းဆိုချက်တစ်ခုကို တင်တယ်။ အစိုးရက သဘောတူတယ်။ ဒါမဲ့ ချွင်းချက်တွေနဲ့။ ဒါကို ကျောင်းသားတွေက လက်မခံဘူး။ သူတို့ ပြောသလိုလုပ်ဆိုတာမျိုးလုပ်လာတယ်။ ကျွန်တော် စိုးရိမ်လာတယ်။ သူတို့တွေ ခွေးရူးရှေ့မှာ ဘရိတ်ဒန့်စ် သွားကနေပြီလား။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး မျှော်မှန်းပြီးသား အချိန်တစ်ခု မတ်လ ၁၀ရက်နေ့မှာ ရောက်လာပါပြီ။ စည်းတားထားသော ရဲများကို ထိုးဖေါက်ကာ ကျောင်းသားများ ရှေ့ဆက်ရန် ကြိုးစားကျပြီ။ ဆူပူမှုလို့ မဆိုသာသေးပေမယ့် သူတို့ရဲ့ မူလသံဓိဌာန်ဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ချင်းဆိုတဲ့စကားကို နေပူရှိန်ကြောင့် အားနည်းစွာမူလဲကျသွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရဲ့ လူနာတင်ကားပေါ် တင်ပေးလိုက်တယ်။ ထိုကားကြီး ဝေးသွားလေလေ ကျန်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းမှု ပျောက်ဆုံးသွားလေလေ။ စိတ်ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် စီးကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုပါသွားပြီ။ ယခင်နေ့တွေက ရယ်မောရင်စကားပြောနေတဲ့ ရဲသားနဲ့ ကျောင်းသားတွေ အခု တွန်းထိုးကုန်ပြီ။ ဆဲဆိုနေပြီ။ ကျောင်းသားတွေကလဲ “သူတို့ဟာ ငါတို့ကို နေပူအောက်မှာနေခိုင်း မြူမှုံအောက်မှာ အိပ်ခိုင်းတဲ့သူတွေ၊ ငါတို့ကို မတရားတားစီးတဲ့သူတွေ” အဖြစ် ရဲတွေကလဲ “မင်းတို့တွေကြောင့် ငါတို့မှာ အိုးပစ်အိမ်ပစ်နဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ရက်အတော်ကြာ နေခဲ့ရတာ” ဆိုပြီး မြင်လာပြီ။ အငုတ်စိတ်လေးတွေ ပေါ်လာပြီ။ ရဲတွေရဲ့ ကာထားတဲ့ စည်းရိုးတွေ ရိုက်ချိုးခံလိုက်ရပြီ။ အမိုးတွေ ဖျက်စီးခံလိုက်ရပြီ။ ဒေါသတွေလာ လွင့်တက်လာတဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့အတူ ခြုံလွှမ်းသွားပြီ။
ဒီအချိန်မှာ ကျောင်းသားတစ်ဦး (ကျွန်တော် နာမည်သိပေမယ့် မလိုဘူးထင်လို့ ချန်လှပ်ခဲ့ပါမယ်) ပစ်လိုက်တဲ့ ရေသန့်ဘူး ရဲတွေဖက် ကျသွားတယ်။ ဒီရေသန့်တစ်ဘူးကစတဲ့ ပြသနာဟာ အားလုံးသိထားပြီးကျတဲ့အတိုင်း စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်ရပ်ကို ဦးတည်လိုက်ပါပြီ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် တစ်ခုပြောချင်တာပါ။ ရဲတွေရဲ့ သပိတ်ဖြိုခွဲမှုပုံစံပါ။ ဆန္ဒပြသူများကို တာဝန်ရှိရဲများက ဟန့်တား ဖြိုခွင်းရာမှာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှု အနည်းနဲ့ အများတော့ရှိတတ်ကျပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလဲ ဒီလိုပါပဲ။ ဖြိုခွင်းနေစဲအချိန်မှာ ဆန္ဒပြသူများဟာ နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှုဆိုတဲ့ပုဒ်မကို ကြူးလွန်ထားသူများဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ရဖမ်းစီးရန် တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဖမ်းစီးရာမှာလဲ “သားကြီးတို့ရယ် မင်းတို့တွေအဖမ်းခံပါကွာ” ဆိုပြီး တောင်းပန်ရုံမက ထိုင်ရှစ်ခိုးနေလို့ပါ မဖြစ်တဲ့အတွက် ပြောခဲ့သလို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှုဆိုတာ ရှိသွားမှာပါ။ ဒါကို နားလယ်ပေးရပါမယ်။
ဒါပေမယ့် “လက်ရ ဖမ်းစီးမိထားသော ကျောင်းသားများအား ရဲများက ၀ိုင်းကာ ရိုက်နှက်ခဲ့ခြင်းကို ရှုံ့ချပါတယ်။ ထိုသို့ ရိုက်နှက်နေသောသူများအား မပြုလုပ်ရန်တားစီးခဲ့သော ရဲများကိုလဲ ချီးကြူးပါတယ်” ။
အခုတော့ အားလုံးဟာ ပြီးသွားပါပြီ။ မီးမှန်းသိရက်နဲ့ သွားကိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့လို့ အခုတော့ အပူလောင်သွားပါပြီ။ ကျွန်တော် လူသားချင်းစာနာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုဖြစ်မယ်မှန်းသိသိကြီးနဲ့ ဇွတ်အတင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် သိပ်တော့ ၀မ်းမနည်းပါဘူး။ ဒါဟာ အစောကြီးကတည်းက မျှော်လင့်ထားပြီးသား အဖြေပါ။ ဒီလိုပဲ သာမန်ထက်လွန်ကဲစွာ ဒေါသကိုရှေ့တင်ကာ ရိုက်နှက်ခဲ့သူတွေကိုလဲ စက်စုတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ နဂိုလ်ရှိပြီးသား အမုန်းတွေ ပိုကြီးထွားသွားပြီ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ဆိုတဲ့ အရာဟာ ပျောက်ရှသွားပြီ။
ကျွန်တော့ အမြင်အရတော့ ဒီပွဲမှာ ကျောင်းသားတွေ မနိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့တွေဟာ ဆန္ဒကိုရှေ့တန်းတင်ပြီး ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အခြေအနေကို ကျော်ကာ လုပ်ကိုင်ခဲ့လို့ပါ။ အစိုးရလဲ မနိုင်ပါဘူး။ မည်သို့ပင် ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုဆို အရင်လို နိုင်ရင်နင်းမယ် ပြိုင်ရင်ဗျင်းမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထားမပျောက်သေးမှန်း ပေါ်လွင်ခဲ့လို့ပါ။
ဇာတ်ပေါင်းလဲ ထုတ်ရော “ကိုက်တတ်တဲ့ ခွေးဟာ ကိုက်လိုက်ပါပြီ။ အကိုက်ခံရအောင် သွားလုပ်တဲ့သူလဲ အကိုက်ခံလိုက်ရပါပြီ”။ ဘယ်သူမှ မလွန်ပါ။ နိယာမ သဘောတရားအတိုင်း ဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ။ ကျွန်တော့ကို ဆဲကြပါကုန်။
မြစပဲရိုး says: ရှင့် ဒေါ်လေးက တော့ မဆဲပါဘူး။
ဟို လူထူး လူဆန်းကြီး လို ခေါင်းတညိမ့်ညိမ့် ဘဲ လုပ်နေတယ်။ lol:))) အခုဘဲ ဖွဘုတ်ထဲ
အစိုးရပင်း တစ်ယောက်က သူ့ ဗီဒီယိုထဲ ကျောင်းသား တွေ က စပြီး ရန်စ တာတဲ့။
ရဲ ကို ပါးရိုက်သတဲ့။
နောက် ခရိုနီ တစ်ယောက် ရဲ့ သမီး ကတော့ “ကြက်တူရွေး နှုတ်တိုက် လို ကလေး တွေ ၁၀တန်း ဖြေနိုင်ကြပါစေ” ဆိုတာ ကို ကက်ကက်လန် ရန်တွေ့ထားတယ်။
အမယ်လေး။ ရေးတာ ဘိုလို နော်။ မြန်မာလို တောင် မဟုတ်ဘူး။
နောက်တစ်ယောက် မျှတာ ဖတ်ရ ပြန်ပြီ။
သူက ဒေါ်လေးသူငယ်ချင်း ဒေါ်လှစား အပို ကြီး – သမ္မတကြီး ကို မွှန်းထား တဲ့
“ဟုတ်ပါတယ်… သူက ခင်ဗျားတို့ အမေလို ကမ္ဘာကျော် တက္ကသိုလ်ကြီးမှာ ပညာမသင်ခဲ့ဖူးဘူး.။”
က စ တဲ့ ဘုန်းတော်ဖွဲ့။
ဘာအချိုးချိုး တော့ မယ် ဆိုတာ သိနေလို့။
မှန်တာပြောရရင် ဒေါ်လေးကတော့ သမ္မတကြီး ကို သနား နေတာဘဲ သိတယ်။
သူ့ ပုံ ကို ဂျပန် မှာ ခြေ နဲ့ နင်း နေတာ တွေ ကိုလဲ ရှုံ့ချတယ်။ လူရိုင်း တွေ လိုဘဲ။
သူက မယုတ်မာပေမဲ့ သူဘေး မှာ သူ့ အရင်က စစ်ညီနောင်များ ကို ကာကွယ် နေရတာ မို့ တိုင်းပြည် အပေါ်မှာ သိပ်တော့မရိုးသား စေတနာ မမှန်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ သူ စိတ်ရင်းက ဒါတွေ ကို မလုပ်ချင်ဘူး ထင်ရဲ့။
သူတို့ ထဲ မှာ ကို ဝိဝါဒ တွေ ကွဲ နေတာ သိနိုင်တယ်။
တကယ်တော့ သမ္မတနားမှာ ရံ နေတာ စစ်သား မဟုတ်သူ အများကြီး ရှိနေတယ်။
အဲဒါက သူ ရွေးခေါ်ထားတာ။
ကျန်တဲ့ ဥစ္စာရူး၊ အာဏာရူး တွေကို သူတို့ ချော့ပေါင်းပြီး အနုနည်းနဲ့သူတို့ ရဲ့ လိုဘ၊ အတ္တ တွေ ကို ဖြုတ်နေတာ လို့ ထင်ပါတယ်။
ဟိုတစ်စု က ပိုပြီး ပါဝါကြီး နေဆဲ ဆိုတာတော့ မြင်နေရတုန်း။
ဒီကြား ထဲ ပြင်ပ က တဇွတ်ထိုး နိုင်ငံရေး သမား များ ရဲ့ မပြီးနိုင် မစီးနိုင် အမုန်း အာဃာတ လှိုင်း ကလဲ မသေး။
ထုံးစံအတိုင်းဘဲ မလယ်မဝယ် ကလေးများ က ကြားတံစာခံ အရိုက်ခံရ။
ဒီ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ဆိုတဲ့ သူ ကို သိရက် နဲ့ သူ့ကျ ဘာလို့ မဖမ်းတုန်း။
တကယ်က ဦးဆောင်သူ ကို။
ဘယ်သွားပြီး ချောင်တိုး ပုန်းနေလဲ။
အဲဒီထဲ က တစ်ခုခု လွဲ နေတယ်။
နောက်ပြီး ဒေါ်လေး စိတ်ထဲ ပထမဆုံး ပညာရေး ဥပဒေပြင်ဖို့ ပေါ်လာတဲ့ guy fawkes mask နဲ့ ကျောင်းသားဆိုတာ တွေ ရန်ကုန်တက္က္ကသိုလ် ထဲ ထိ ဝင်လို့ ရပြီး ဆန္ဒ စပြ ခဲ့တာ။
နောက် ဝီဝီ သောင်းကျန်းတာ။ ဒါတွေ ဟာ အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းထဲ က တင်းမာသူများ စနက် အသေအချာဘဲ။
ဒါကို ဗကသ တွေ က အခွင့်အရေး ဝင်ယူလိုက်တာဘဲ။
အမှန်တော့ အဲဒီ ဆရာကြီး များ က ကလေး တွေ ပိုးစိုးပက်စက် တစ်ခုခု ဖြစ်ဖို့ ကို မှန်းခဲ့ကြတာ။
မဖြစ်တော့ တစ်ဖက်ကလဲ ပြည်သူ ကို အုံကြွ ဖို့ ဆွဲမရ။
တစ်ဖက်ကလဲ ဒီ ပုံ တွေ ပြပြီး လုပ်စားဖို့ မရတော့ နဲ့ ဟိုမရောက် ဒီ မရောက်ပေါ့။
နောက်ပိုင်း တော့ ဘယ်လို ဇာတ်သိမ်းကြ မယ် တော့ မသိနိုင်။
ဇာတ်စင်ပေါ် က သူ တွေ က အတင်း ကို ထိုး က နေတာ။
တကဲ့ ပရိတ်သတ် အများစု က သိပ်ပြီး တောင် မလှုပ် ကြဘူး။
အရီး ကတော့ နှစ်ဖက်လုံး က အစွန်းရောက် တွေ ကို ဟိုဘက် ဒီဘက် ဖြုတ်လိုက် နိုင်ဖို့ဘဲ အရေးကြီး တယ် ထင်တယ်။
ဒါဆို နိုင်ငံ ကို အများကြီး မဟုတ်တောင် နဲနဲပါးပါး စေတနာ ရှိ မဲ့ သူ တွေ အတွက် အသက်ရှူချောင်သွား မယ်ထင်ရဲ့။
တကယ်တော့ မောင်ကာကြီး ရဲ့။
အဘနီ ရဲ့ ဂဏန်း ကို သုံးရရင် ၇၀% လောက်က ဟို ဘက် ဒီဘက်မပါ အလယ်မှာ စိတ်ပျက် နေသူချည်းပါဘဲ။
အမုန်း နဲ့ ဆဲ နေတာ တွေက နှစ်ဖက် အစွန်းထွက် တွေပါ။
အခုလဲ ရိုက်ပွဲ မှာ လည်ပါတ်နီ ပါတဲ့ ရဲ နဲ့ မပါတဲ့ ရဲ ဆိုပြီး လုပ်နေပြန်ပြီ။ ဘာတွေမှန်းမသိတော့။
ပရိုရဲ နဲ့ မပရို ရဲလား မသိ။
မြစပဲရိုး says: အရေးကြီး တာ ပြောဖို့ ကျန်ခဲ့လို့။
ဦးဘဂျမ်း ရဲ့ ကာတွန်း ကို လွှတ်ကြိုက် သကွယ်။
ဘေးက မေးတဲ့ သူက မောင်ဖျောက်ဆိပ် လို့ တော့ မှတ်မိသလိုဘဲ။
ကာတွန်းထဲက ကလေး တွေ မျက်နှာထား သဘောကျ သဟေ့။ lol:-))
အစဉ်အဆက် ကျောင်းသား ဆိုတာ ဒီ အတိုင်းပါလား။
တကယ်လဲ လက်ရှိ တက္ကသိုလ်ဆရာတွေ မှာ ဒီ အတိုင်းဘဲ။
ဒေါ်လေး အစ်မဝမ်းကွဲ ပြောတာ။
သူ့မှာ သူ့ကလေး တွေ ကို ချော့ထားရသတဲ့။ lol:-))))
ဒါပေမဲ့ သူ့အပြောကတော့ သူ့ကျောင်း မှာတော့ အများစု အားလုံးနီးပါး က အေးအေးဆေးဆေးဘဲ တဲ့။
ဒီမှာလဲ ဆရာ နဲ့ ကျောင်းသား လေးစားမှု ရှိရင် ဆရာပြောတာ ကို ကလေး က နားထောင်မှာပါလေ။
ကိုယ့်တုန်းက လဲ ဆရာတွေ ကို ချစ်တော့ သူတို့ စကား နားထောင်ခဲ့တာဘဲ။
Courage says: အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်လဲ ၂၀၀၇တုန်းက ပါချုပ်ကြီးရဲ့ ခေါ်ယူသတိပေးခြင်းခံရတဲ့ထိ ယောင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ ဆိုတော့ ကျောင်းသားထိတော့နာပါတယ်။ ဒါမဲ့ သူတို့တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက တော်တော်ကြီးလွဲနေတော့ သူတို့ကို ၀န်းရံဖို့ဆိုတာကို ပြန်စဉ်းစားမိသွားတယ် ဒေါ်လေးမြရဲ့။
kai says: တကယ်လို့ပေါ့လေ…
ပညာရေးဥပဒေကို .. လွှတ်တော်မှာ.. အစအဆုံးပြန်ဆွေးနွေးရင်း ပြင်ကြလိုက်နိုင်တယ်ဆို.. ကျောင်းသားတွေနိုင်တာပေါ့..။
ရင်းတယ်လို့မှတ်ပါ..။ ကြားထဲ.. အစိုးရကိုဖိအားဆက်ပေးနေရာမှာပါ…။
ဖြိုခံထားရတဲ့.. သမဂ္ဂအဆောက်အဦးကို.. အတူတကွ.. ပျော်ပျော်ပါးပါးအုပ်မြစ်ချ..အသစ်ပြန်ဆောက်ရေး..။
Courage says: အဟီး ရင်းသွားတဲ့သူတွေထဲမှာ ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ ကောင်မလေးပြန်မလွန်သေးတာသိရတော့ စိတ်မကောင်းမိဘူးဗျ။
ခင်ဇော် says: ဆဲ လည်းး ဆဲ ဘူးးး
ဓာတ်ပုံ နဲ့ အိမ်လိပ်စာ လေးး တစ်ချက်လောက်..’!!
Courage says: ဂျာ ဟွာလေ။ ကျွန်တော့ကို လာဖမ်းလဲ ညမှဖမ်းပါနော်။ နေ့ခင်းဆို လူတွေကြည့်ရင်ရှက်လို့။
black chaw says: မ စောင့် နိုင် ကြ တော့ ဘူး လား…။
Courage says: ဟင့်အင်။ မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ ၂၀၁၅ဆို သူတို့က ရှိချင်မှ ရှိမှာ ဆိုတော့ သူတို့ကို အသရေဖျက်ဖို့က အချိန်သိပ်မရှိတော့ဘူး။
တိမ်မည်း says: .မဆဲပါဖူးဗျာ… ကို courage အမြင်ကို ကြိုက်ပါတယ်… ဒါလည်း ရှူ့ ထောင့်တခုပါ…
.ကျော်ဖြစ်စေချင်တာက အမြင်မတူတာတွေကို ပြေလည်စေချင်တာပါ….
. ကျော့်အမြင်နဲ့ကို courage အမြင်နဲ့ သိပ်မကွာပါဖူး…
. အရီးပြောသလိုပဲ.. ပညာရေး ဥပဒေ က ကျောင်း သားက ဆရာကို အလုပ်ထုတ်ပစ်လို့ ရရင်တောင်…. ကျောင်းသားက ဆရာကို လေးစားနေသရွေ့ကိတ်စ မရှိ… ဒါပေမယ့် စုန်းပြူးးတွေ ကျောင်းသား အစစ် မဟုတ်တာတွေ ၀င်ရောနေမှာပဲ ကြောက်သဗျို့ … ဒါလည်း ဥပဒေကို အသေအချာ တင်းကျပ်ရင် ရနိုင်ပေမယ့်… သူကြီးပြောသလို… ဥပဒေကို ဗဟိုက မချုပ်ကိုင်ပဲ ကျောင်းအုပ်ကြီးကိုသာ full power ပေးထားရင်လည်း အခြေအနေပေါ်မူတည်ပီး ဖြေရှင်းရကောင်းတန်ရဲ့….
. အဆုံးသတ်တော့ ဦးဘဂျမ်းရဲ့ ကာတွန်းကို လွတ်သဘောကျတယ်ဗျာ….
Courage says: ဥပဒေကြောင်းဆိုရာတွေကတော့ ချွင်းချက်ပေါင်းများစွာရှိနေမှ အသေးစိတ်ကိုပါ ထိန်းကွပ်ဖို့ ပိုလွယ်မယ်ထင်တယ်။
ဒါမဲ့ ကျောင်းသားတွေက သူတို့ပြောသမျှအတိုင်း ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ ပြောနေတာက ခက်တာဗျ။
Ko chogyi says: ကျောင်းသားက ကျောင်းသားလိုပဲ တွေးမှာပေါ့
Courage says: ကျောင်းသား စစ်စစ်တွေရဲ့ ကျောင်းသား အတွေးဆိုရင်တော့ warmly welcomeပေါ့။
မှိုင်းမိထားတဲ့ သူတွေရဲ့အတွေးဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်စားပြုမှုက နေရာလွဲနေမှာပါ။
ဦးကြောင်ကြီး says: News Feed
Aung Kyuu shared Eleven Media Group’s photo.
‘ဖမ်းဆီးခံရသော ကျောင်းသားများအား တာဝန်ကျ ရဲတပ်ရင်းများမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အချုပ်ကားပေါ်၌ လူမဆန်အောင် ဥပဒေမဲ့ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းများ ရှိနေ ဖမ်းဆီးခံရသော ကျောင်းသားများအား ရဲတပ်ရင်း ၁၊ ၁ဝ နှင့် ၁၁ က အချုပ်ကားပေါ်၌ လူမဆန်အောင် ဥပဒေမဲ့ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းများ ရှိခဲ့ကြောင်း ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသော ကျောင်းသားများထံမှ သိရသည်။ ထို့ပြင် ကျောင်းသားသပိတ်တွင် ဖမ်းဆီးခံရသည့် ကျောင်းသားများအား ရုံးထုတ်ရာတွင် လူထုရှေ့မှောက်တွင် မဟုတ်ဘဲ ညပိုင်းအထိ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် ဝေဖန်မှုများ ရှိနေသည်။ မတ် ၁၁ ရက်က လက်ပံတန်းမြို့နယ် တရားရုံးတွင် မွန်းလွဲပိုင်းမှစ၍ ည ၉ နာရီအထိ အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးခံရသော သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားများအား ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးရာတွင်လည်း အများပြည်သူများ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၍ မရဘဲ ရဲအင်အားများစွာဖြင့် လုံခြုံရေးကန့်သတ်ခဲ့သည်။ သတင်းမီဒီယာ များမှာလည်း တရားရုံးအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်၍ သတင်းယူခွင့်မရှိပေ။ ထိုသို့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိဘဲ စစ်ဆေးမေးမြန်းသည့်အပေါ် ဝေဖန်မှုများ ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့မှ ဦးရဲအောင်က “ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ဒီလက်ပံတန်းဖြစ်ရပ် တစ်ခုလုံးကို တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုဆိုတာ ပျောက်ကွယ်နေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီဖြစ်စဉ် တစ်ခုလုံးမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုဆိုတာ မရှိဘူး။ ဒါဟာပြောရမယ်ဆိုရင် အရင်စစ်အာဏာရှင်တွေ လက်ထက်က လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ပုံစံအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဒါတွေအကုန်လုံးက တရားဥပဒေပြင်ပက လုပ်နေသလို ခံစားရပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့် ကျောင်းသားများက ၎င်းတို့အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်များကို ပြောကြားခဲ့ကြသည်။ “အဖမ်းခံရတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အဖမ်းခံခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာ ရိုက်နှက်မှုတွေကို တော်တော်ကြီး ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီမိုကရေစီပညာရေး မရမချင်း ဆက်လက်တိုက်ပွဲ ဝင်သွားပါမယ်” ဟု ကျောင်းသားသပိတ် ဖြိုခွဲရာတွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် မတ် ၁၂ ရက်တွင် ပြန်လွတ်လာသူ စစ်နိုင်အောင် (ရတနာပုံ တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်) ဆိုသည်။ “ထောင်တွင်းက အဆင်ပြေပေမယ့် ရဲကားပေါ်မှာတော့ ပိုးစိုးပက်စက် နှမချင်း မစာမနာ ပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်။ ခံဝန်တော့ ထိုးခဲ့ရတယ်။ မိဘ ဖိအားနဲ့ထိုးခဲ့ရတယ်။ တရားရုံးကတော့ မခေါ်ထားဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရတယ်။ အသက်လုပြီး ထွက်ပြေးရတဲ့အချိန်မှာ ပစ္စည်းကို အာရုံမထားနိုင်ဘူး။ ဥပမာ မှတ်ပုံတင်၊ ကျောင်းသားကတ် ဟန်းချိန်း လက်စွပ်၊ ဆွဲကြိုးမရှိတော့ဘူး။ ရဲစခန်းကို သွားတော့စုံစမ်းမှာပါ။ ဟိုပို့လိုက် ဒီပို့လိုက်နဲ့ဆိုတော့ လက်ပံတန်းရဲစခန်းကို ပစ္စည်းပျောက်မှုနဲ့ သွားတိုင်ပါမယ်။ ကျွန်မတို့ကို သိက္ခာချတဲ့ ရဲမေတွေကို လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ တိုင်ပါမယ်။ ကျွန်မတို့ ရဲဘော်တွေကို ပိုးစိုးပက်စက် ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေကို အကုန်ရိုက်တယ်။ ထောင်ကားထဲမှာ လူသေတွေကို ဖြန့်ထားသလို ရေနဲ့ဖြန်းပါတယ်။ ကိုမင်းသွေးသစ်ကတော့ အခြေအနေ မကောင်းပါဘူး” မအိဖြူဖြူမွန်က (ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း တက္ကသိုလ်) ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျော်ဇင်သန့် (သန်လျင်နည်းပညာ တက္ကသိုလ်) က “ကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းပြီး အချုပ်ကားထဲ မထည့်ခင် ရဲတပ်ရင်း ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၁ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ကျောင်းသားတွေ သပိတ်မှောက်စဉ်က ဟစ်ကြွေးပြီး ကြွေးကြော်သံ ပုံစံအတိုင်း ခွပ်ဒေါင်းသွေးတွေ နီသေးလား။ နီသေးရင် ရိုက်တယ်ကွာ။ တပ်မ ၁၁ က ရဲ ဘော်တွေ ညီရဲ့လားဟေ့။ ညီတယ်ဟေ့။ ညီတယ်ဟေ့။ သပိတ်မှောက်ချင်တဲ့ကောင်တွေ မှောက်ဦးမလား။ မှောက်ရဲရင် မှောက်လေကွာ။ မင်းတို့ကို ရိုက်ချင်လို့ ရဲထဲဝင်တာကွ။ ဆဲဆိုကြိမ်းဆဲကာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ရဲအယောက် ၂ဝ လောက်က ဝိုင်းရိုက်တယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာတင် ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖောက်ခံရတာပါ” ဟုဆိုသည်။ အိမ (ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် – Law) က “ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို လမ်းဖွင့်ပေးဖို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် တောင်းဆိုတယ်။ မရဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ကျောင်းသားတွေ လေးယောက်တစ်တွဲစီ စနစ်တကျ တိုးတယ်။ အရှေ့မှာရှိတဲ့ ရဲတွေက ဘာမှမလုပ်ပေမယ့်။ အနောက်မှာရှိတဲ့ ရဲတွေက နံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ထိုးတယ်။ နောက်ထပ်ရဲတွေက နံပါတ်တွေနဲ့ ဝင်ရိုက်တာပဲ။ ကျွန်မတို့လည်းမခံနိုင်လို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကို ဝင်ပြေးတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကို ဝင်ဖမ်းတော့ ပထမက ဘာမှမလုပ်ဘူး ကတိပေးလို့ ကျွန်မတို့ အပြင်ထွက်တယ်။ ကျွန်မတို့ကို တစ်ယောက်ကို ရဲအယောက် ၂ဝ လောက်က နံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ ကောင်မတွေ ထွက်လာမလား။ မလာဘူးလား။ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း လူတစ်ယောက်ပါးစပ်နဲ့ မတန်အောင်ကို ပြောဆိုတယ်။ မိန်းကလေးတွေကို တန်းစီပြီးရိုက်တယ်။ ခေါင်းမော့ကြည့်ရင်လည်း ကောင်မတွေ ညည်းတို့က ဘာကောင်မတွေလဲ ပြောပြီး ရဲမေတွေက ရိုက်တယ်။ ရဲသားတွေက ယောက်ျားလေးတွေကိုလည်း အဆက်မပြတ် ရိုက်တယ်။ အကောင်တွေ၊ ကောင်မတွေ နင်တို့ကို ရိုက်သတ်ချင်နေတာ။ ပုံစံထိုင်ခိုင်း အချိန်နည်းနည်းလေး ဒူးထောက်မိတာနဲ့ ကောင်မတွေ ငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးလားဆိုပြီး နံပါတ်တုတ်နဲ့ ရိုက်တယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာတောင် လူနဲ့မတန်တဲ့ စကားတွေ ပိုဆို ပက်စက်ပြောတယ်။ နင်တို့က ပညာတတ်တွေ မဟုတ်ဘူး။ အောက်တန်းစားမတွေလို့ ပြောတယ်။ အဲဒီရဲတပ်ရင်း ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၁ ကို ဘယ်တော့မှ မကျေဘူး” ဟု ဆိုသည်။ မတ် ၁၂ ရက်က ကျင်းပသည့် ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ပြည်သူလူထုကို ရက်စက်စွာ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုအား ကန့်ကွက်ရှုတ်ချခြင်း အခမ်းအနား၌လည်း အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုကို ဝေဖန်သည့် ပြောကြားချက်များ အခမ်းအနား တက်ရောက်လာသူ အချို့က ပြောကြားခဲ့ရာ ယင်းအခမ်းအနား သို့တက်ရောက်ခဲ့သည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က “သာယာဝတီထောင်မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ညီနောင်ရဲဖော်တွေဟာ ရုံဝင်ခပေးနေရတယ်လို့ ကြားသိနေရပါတယ်။ ရုံဝင်ခဆိုတာ အဝင်မှာ ရိုက်တာကို ပြောတာပါ။ အရေးကြီးတာက ICRCကို အကြောင်းကြားပြီး ICRC အမြန်ဝင်ဖို့ လိုနေတဲ့အတွက် အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ သူတို့ပြောနေတာက ဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒါ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်ကို လိမ်နေတာ၊ ကမ္ဘာကို လိမ်နေတာပါ။ နောက်တရားရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာက တရားရေးက အုပ်ချုပ်ရေးရဲ့အောက်ကို လုံးလုံးရောက် သွားရုံမကဘဲ ညနက်လို့ အမှောင်ထုထဲကို ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ တရားရေးကို အားကိုးဖို့ကတော့ ရနိုင်တော့မယ် အနေအထား မရှိတော့ပါဘူး။ EU က သင်ပေးတဲ့ ရဲပညာဟာ ကျောင်းသားပြည်သူတွေနဲ့ သံဃာတော်တွေကို ရိုက်နှက်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး ပြည်သူလူထုကို အကြမ်းဖက်မှုကို လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်ကို ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံထားရသူ အားလုံးကို ဘာပုဒ်ထီး ပုဒ်မမှ မတပ်ဘဲ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ် ” ဟု ပြောကြားသည်။ “အစိုးရ တစ်ရပ်အနေနဲ့ ဥပဒေနဲ့အညီ ဖြေရှင်းခဲ့တယ်လို့ ပြောပေမယ့် အကြမ်းဖက်မှုဟာ အကြမ်းဖက်မှုပါပဲ။ ဘယ်ခေတ် ဘယ်ကာလကမှန်း မသိတဲ့ ဥပဒေစာအုပ်ကြီးကို ဖုန်ခါပြီးပြောလိုက်ရုံနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုက ပျက်ပြယ်ခြင်း မရှိပါဘူး။ အခုဒီပွဲမှာ လာရောက်တဲ့ပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေလဲရှိတယ်။ မလာရောက်တဲ့ ပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မရောက်လာတဲ့ တချို့ပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ကျွန်တော်နည်းနည်း ပြောချင်တယ် ပါတီရဲ့ မှုဝါဒတွေ၊ အသင်းရဲ့ မူဝါဒတွေ ကြည့်မနေပါနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာ လူသားဝါဒပါ။ ပါတီရဲ့ မူဝါဒနဲ့ မကိုက်ညီဘူး ဆိုရင်တောင် လူသားဝါဒ၊ လူသားမူကို အခြေခံပြီး ဒီနေရာကို လာလို့ရသလို နောက်နောင် အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလည်း ဆန့်ကျင်သွားဖို့ လိုပါတယ်” ဟု ဘလော့ကာ ကိုနေဘုန်းလတ်က ပညာရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော် တောင်းဆိုနေသော ကျောင်းသား/သူများနှင့် ပြည်သူလူထုကို ရက်စက်စွာအကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းမှုအား ကန့်ကွက်ရှုတ်ချခြင်း အခမ်းအနား၌ ပြောကြားသည်။ ရှေ့နေများကွန်ရက်မှ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးကြီးမြင့်က “ထောင်ထဲကိုအဝင်မှာ ရိုက်မောင်း ပုတ်မောင်းတာတွေ ရှိတယ်လို့လည်း ကြားရတယ်။ အဲဒါလည်းပဲ ဒါဟာမဖြစ်သင့်ဘူး။ ဒါဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ် လက်အောက်က လုပ်ရပ်မျိုးတွေပဲ။ ဘာမှ ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး။ သရုပ်ပေါ် သွားပြီပေါ့ဗျာ။ အင်အားအလွန်အကျွံသုံးပြီးတော့ ဖမ်းဆီးတာတွေ မလုပ်ရဘူး။ ဒါတွေဟာ ဥပဒေနဲ့ မညီတာတွေပေါ့ဗျာ” ဟု ဝေဖန်ပြောကြားသည်။ ထိုနည်းတူစွာ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးစိုးတင့်ရည်ကလည်း “တရားရုံးလက်စွဲမှာတော့ တရားသူကြီးဟာ တရားရုံးမှာ ရှိနေရင် စစ်ဆေးမေးမြန်းလို့ ရတယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ လက်ထက်မှာ ဒါမျိုး ညဘက်ရုံးထုတ် စစ်ဆေးတာတွေ မတွေ့ရဘူး။ တကယ် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတဲ့ လူဆိုး၊ လူမိုက်တွေကိုတောင်မှ ဒီလိုမျိုး ညအချိန်မတော် ရုံးထုတ်တာတွေ မရှိဘူးဆိုတော့ ဒါဟာ လုံးဝဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ” ဟု ဝေဖန်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ညိုညိုသင်းက “ဥပဒေအရကတော့ လုပ်လို့ရတယ်။ ရုံးချိန်ကတော့ ၅ နာရီ ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ရုံးချိန်းကျော်သွားရင်လည်း လုံခြုံရေးကိစ္စဆိုရင် ခြွင်းချက်အနေနဲ့ တရားသူကြီးရှေ့မှောက်မှာ ဒီလို စစ်ဆေးမေးမြန်းလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသားတွေ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတာဟာ ဘယ်လိုလုံခြုံရေးကိစ္စ၊ ဘယ်လိုခြွင်းချက်မျိုးနဲ့ ငြိစွန်းသွားလို့လဲ။ ဒီကိစ္စကို သက်ဆိုင်ရာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုတရားဥပဒေမျိုး၊ ဘယ်လိုခြွင်းချက်မျိုးနဲ့ ငြိစွန်းသွားသလဲ ဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါပဲ” ဟု ပြောကြားသည်။ ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ဝန်းရံသူများအား တရားရုံးချိန် ကျော်လွန်သည်အထိ ရုံးထုတ်အမှုဆင် တရားစွဲနေခြင်းမှာ မမျှတသေ လုပ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည့်အပြင် ဥပဒေဘောင်အား ကျော်လွန်လုပ်သည့် လုပ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်သုံးသပ်ကြောင်း ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်ကလည်း သဘောထား ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဖမ်းဆီးခံထားရသော ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် အချုပ်သား အဖြစ်သာရှိနေသေးပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရိုက်နှက်မှုများပြုလုပ်ခြင်းအပေါ် ဥပဒေပညာရှင်များ ထောက်ပြခဲ့ကြပြီး ပြည်သူလူထုအကြား ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက်လျက် ရှိသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် အချုပ်သား၊ အကျဉ်းသားများအား ရိုက်နှက်ခြင်း၊ အခြား သူများအား ရိုက်နှက်ရန်ခိုင်းစေခြင်းနှင့် ဟန့်တားရန်ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကို တွေ့ရှိခဲ့ပါက ၁၉၉၅ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများဖြင့် အရေးယူထိန်းသိမ်း၍ ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ် အထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သော ဥပဒေဖြင့်အ ရေးယူနိုင်ကြောင်း၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အတွင်းကျင်း ပခဲ့သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်းက ဖြေကြားထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ စည်းကမ်းထိန်းရေး ဥပဒေတွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ပုဒ်မ၁၇ (ဂ) အကျဉ်းသား၊ အချုပ်သားတစ်ဦးက အခြားတစ်ဦး အားရိုက်ပုတ်ရန် (သို့) အခြားနည်းအားဖြင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရန် ခိုင်းစေလျှင်၊ ခွင့်ပြုလျှင် ထိုသို့ပြုလုပ်နေသည်ကိုသိလျက် ဟန့်တားရန် (သို့) အရေးယူရန် ပျက်ကွက်လျှင် သော်လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၁၇ (ဆ) အကျဉ်း သား၊ အချုပ်သား (သို့) ဖမ်းဆီးထားသူတစ် ဦးအား ရိုက်ပုတ်လျှင် (သို့) အခြားနည်းဖြင့် ည§ဉ်းပန်းနှိပ်စက်လျှင်သော်လည်းကောင်း ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူအား ရဲတရားရုံးဖြင့် စစ်ဆေးပြီး ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရပါက ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်အထိဖြစ်စေ ဤဥပဒေတွင်ဖော် ပြထားသည့်လျော့သော ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်စေ ထိုက်သင့်စေရမည်ဟု ပြ|ာန်းထားကြောင်းလည်း သိရသည်။ ထို့အပြင် ၂ဝ၁၁- ၂ဝ၁၅ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်အထိ ငါးနှစ်အတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များစည်း ကမ်းဖောက်ဖျက်မှု၊ တာဝန်ပျက်ကွက်မှု၊ ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ရဲအရာရှိ ၂ဝဝဝ ကျော်နှင့် အခြားအဆင့် ၅ဝဝ ကျော်အား ထောင်ဒဏ်နှင့် အခြားပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ် အရေးယူထားကြောင်း ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထဲရေးဒုဝန်ကြီး ဗိုလ် မှူးချုပ်ကျော်ဇံမြင့်က ပြောကြားထားသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အရေးယူထားသည့် ရဲတပ် ဖွဲ့ဝင်များကို ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ ဖြင့် ၅၇ဝ၇ မှု၊ နယ်ဘက်တရားရုံးများတွင် စစ်ဆေးမှု ၅၉မှု၊ စုစုပေါင်း ၅၇၆၆ မှုဖြင့် အရေးယူထားပြီးဖြစ်ကာ၊ အဆိုပါ အမှုများ တွင် အရာရှိ ၈၄ ဦး၊ အခြားအဆင့် ၂ဝ၂၇ ဦးတို့ကို ထောင်ကျပြစ်ဒဏ်၊ အရာရှိ ၁ဝ၇ ဦး၊ အခြားအဆင့် ၂၄၇ ဦးတို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့မှ ထုတ် ပယ်သည့်ပြစ်ဒဏ်၊ အရာရှိ ၃၂၄ ဦး၊ အခြား အဆင့် ၆၉၇ ဦးတို့ကို ရာထူးအဆင့်လျှော့ ချသည့် ပြစ်ဒဏ်၊ အရာရှိ ၁၅၆၇ဦးနှင့်အခြား အဆင့်၂၄၉၂ဦးတို့ကို အခြားပြစ်ဒဏ်၊ စုစု ပေါင်းအရာရှိ ၂ဝ၈၂ ဦးနှင့် အခြားအဆင့် ၅၄၆၃ ဦးတို့ကို အရေးယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖမ်းဆီးခံထားရစဉ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သောဆန္ဒပြ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ များစာရင်း၊ ဒဏ်ရာအခြေအနေများနှင့် ၎င်းတို့အား မည်ကဲ့သို့ဆေးဝါး ကုသပေးနေမှုများ ရှိနေသည်ကို အစိုးရအနေဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ ထုတ်ပြန်ပေးရန် လိုအပ်ပြီး တရားစွဲခံထားရသူများအား မိသားစုဝင်များတွေ့ ဆုံခွင့်ပြုပြီး ရှေ့နေငှားရမ်းခွင့်များကို ခွင့်ပြု ပေးသင့်ကြောင်း ဥပဒေပညာရှင် အသိုင်းအ၀န်းက ထောက်ပြပြောဆိုမှုများ ရှိနေသည်။ ■ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ရသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ ကိုယ်တွေ့ ပြောကြားချက်များနှင့် ယင်းလုပ်ရပ်အပေါ်အမြင်များ “ညီမက အမေအရမ်းစိတ်ပူနေလို့ ထွက်လာတာ ခံဝန်ကတိက ထိုးခဲ့ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ညီမတို့ကို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းမစာမနာဘဲ ပြောတာတွေရှိခဲ့တယ်။ ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့လိုသာပြောတာ ပြည်သူကို အကာအကွယ်ပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ မကျေနပ်ဘူး။ ညီမတို့က အာဏာကိုတောင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ပေးဖိုပဲ တောင်းဆိုနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ပေးပါ။ နောက်တစ်ချက်က ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို ဒီထက်ပိုမလုပ်ပါနဲ့တော့လို့ ပြောချင်တယ်။ အခုညီမတို့ကို တစ်စုတကွဲစီ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရှေ့ဘာဆက်လုပ်မယ် ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ ပြောလို့မရသေးဘူး” မရည်မွန်မွန်အောင် (ရန်ကုန်အရှေပိုင်းတက္ကသိုလ်) ကျောင်းသားသပိတ်ဖြိုခွဲရာတွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် မတ် ၁၂ ရက်တွင် ပြန်လွတ်လာသူ ___________________________ “ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေက မျှတမှုမရှိဘူးလို့ ပြောရမှာပဲ။ ကျောင်းရဲ့အခြေအနေကို မူတည်ပြီးတော့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ ရှိပါတယ်” စိုးလွင်ကျော် (သထုံစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ ဒုတိယနှစ်) ကျောင်းသားသပိတ်ဖြိုခွဲရာတွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် မတ် ၁၂ ရက်တွင် ပြန်လွတ်လာသူ ___________________________ “ကျွန်တော်တို့ကို သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေတော့ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ သူတို့လိုချင်တဲ့ဘက်ကပဲ မေးတာပေါ့။ နိုင်ငံတော်ကို ကန့်ကွက်တာလား အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေကို ကန့်ကွက်တာလား။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း နိုင်ငံတော် အာဏာကိုသိမ်းဖို့ မဟုတ်ဘူး။ အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေကိုပြင်ဖို့ ကောင်းဖို့အတွက် လုပ်တာပါ။ နောက်ပြီး ဘာကြောင့် ဒီထဲမှာ ဝင်ပါခဲ့တာလဲဆိုပြီး မေးမြန်းမှုတွေတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပညာရေးကို မကြိုက်လို့ပါ။ ပြီးတော့ မိဘ၊ နေရပ်လိပ်စာ စသဖြင့် အကုန်တောင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် မလုပ်ဖို့အတွက် အခုခံဝန်ကိုလည်း ထိုးခဲ့ရတယ်” ထက်လင်း (မှော်ဘီတက္ကသိုလ်) ကျောင်းသားသပိတ်ဖြိုခွဲရာတွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် မတ် ၁၂ ရက်တွင် ပြန်လွတ်လာသူ ___________________________ “တရားရေး မဏ္ဍိုင်မှာအခုထိ ပွင့်လင်းမြင့်သာမှု မရှိသေးဘူး။ လူထုရှေ့မှာဘာကြောင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို မပေးနိုင်တာလဲ ဆိုတာကို ပြန်မေးရမယ်။ သူတို့ဟာ တရားမျှတစွာ လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစရာ မရှိပါဘူး။ အခုဟာက ညကြီးအချိန်မတော်မှ ရုံးထုတ်တယ်ဆိုတာ တစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး။ မိသားစုတွေနဲ့လည်း တွေ့ခွင့်မရဘူး။ ထောက်ခံအားပေးတဲ့ သူတွေကိုလည်း ဝင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာ အင်မတန်မှ ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ တရားရေးမဏ္ဍိုင်ဟာ ဘယ်လောက်အထိ ပျက်စီးနေသလဲဆိုတာ ကမ္ဘာသိအောင် ပုံရိပ်ပြလိုက်သလိုပါပဲ။ အစိုးရကလည်း အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို သွားနေပါတယ်ဆိုပြီး စကားလုံး သက်သက်သာရှိပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ ပုံဖော်မှုအားနည်းနေပြီး ကမ္ဘာကရော၊ မြန်မာပြည်သူလူထုကရော ယုံကြည်မှု လျော့နည်းနေပါပြီ” ဒေါ်နီလာသိန်း (၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်း/ပွင့်) ___________________________ “ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄ဝ အရ ရှေ့နေရှေ့ရပ် ငှားရမ်းခွင့်ရှိတယ်။ တရားရုံး ရုံးထုတ်တဲ့ အချိန်မှာလည်း မိသားစုနဲ့ တွေ့ခွင့်ရှိတယ်။ အခုဖြစ်နေတာက နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုလည်း မဟုတ်ဘူး။ တကယ်လို့ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု ဆိုရင်တောင်မှ သူ့မှာရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးရှိတယ်။ တကယ်လို့ မိသားစုအနေနဲ့ သူတို့ကို ထောင်မှာ ချုပ်ထားတယ်ဆိုရင် တွေ့ခွင့်ရဖို့ကို မနက် ၆ နာရီကနေ ညနေ ၆ နာရီအတွင်း တောင်းဆိုလို့ရတယ်။ တကယ်လို့ မပေးဘူးဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာဌာနရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဆင့်ထိ စာတင်ပြီး ပြောရမယ်။ ထောင်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ရဲစခန်းမှာဖြစ်ဖြစ် ချုပ်ထားရင် တွေ့ခွင့်ရှိတယ်။ တကယ်လို့ ရှေ့နေငှားရမ်းခွင့်၊ မိသားစုတွေ့ခွင့် မရဘူးဆိုရင်တော့ ဒါလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာပဲ။ လက်ရှိ ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ ICRC ကို သွားရောက် အကြောင်းကြား သင့်တယ်” တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင် ___________________________ “ထောင်တွင်းက အဆင်ပြေပေမယ့် ရဲကားပေါ်မှာတော့ ပိုးစိုးပက်စက် နှမချင်း မစာမနာ ပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်။ ခံဝန်တော့ ထိုးခဲ့ရတယ်။ မိဘ ဖိအားနဲ့ထိုးခဲ့ရတယ်။ တရားရုံးကတော့ မခေါ်ထားဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရတယ်။ အသက်လုပြီး ထွက်ပြေးရတဲ့အချိန်မှာ ပစ္စည်းကို အာရုံမထားနိုင်ဘူး။ ဥပမာ မှတ်ပုံတင်၊ ကျောင်းသားကတ် ဟန်းချိန်း လက်စွပ်၊ ဆွဲကြိုးမရှိတော့ဘူး။ ရဲစခန်းကို သွားတော့စုံစမ်းမှာပါ။ ဟိုပို့လိုက် ဒီပို့လိုက်နဲ့ဆိုတော့ လက်ပံတန်းရဲစခန်းကို ပစ္စည်းပျောက်မှုနဲ့ သွားတိုင်ပါမယ်။ ကျွန်မတို့ကို သိက္ခာချတဲ့ ရဲမေတွေကို လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ တိုင်ပါမယ်။ ကျွန်မတို့ ရဲဘော်တွေကို ပိုးစိုးပက်စက် ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေကို အကုန်ရိုက်တယ်။ ထောင်ကားထဲမှာ လူသေတွေကို ဖြန့်ထားသလို ရေနဲ့ဖြန်းပါတယ်။ ကိုမင်းသွေးသစ်ကတော့ အခြေအနေ မကောင်းပါဘူး” မအိဖြူဖြူမွန်က (ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း တက္ကသိုလ်) ကျောင်းသားသပိတ်ဖြိုခွဲရာတွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် မတ် ၁၂ ရက်တွင် ပြန်လွတ်လာသူ ___________________________ ပုံစာ – ပင်မကျောင်းသား သပိတ်စစ်ကြောင်းအား ဖြိုခွင်းဖမ်းဆီးထားသူများအား မတ် ၁၁ ရက်က သာယာဝတီထောင်မှ လက်ပံတန်းတရားရုံးသို့ ရုံးထုတ်လာစဉ် အချုပ်ကားပေါ်တွင် ပါရှိလာသော ဖမ်းဆီးခံထားသူအချို့ကို တွေ့ရစဉ်’
ဖမ်းဆီးခံရသော ကျောင်းသားများအား တာဝန်ကျ ရဲတပ်ရင်းများမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အချုပ်ကားပေါ်၌ လူမဆန်အောင် ဥပဒေမဲ့ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းများ ရှိနေ
အိမ (ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် – Law) က “ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို လမ်းဖွင့်ပေးဖို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် တောင်းဆိုတယ်။ မရဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ကျောင်းသားတွေ လေးယောက်တစ်တွဲစီ စနစ်တကျ တိုးတယ်။ အရှေ့မှာရှိတဲ့ ရဲတွေက ဘာမှမလုပ်ပေမယ့်။ အနောက်မှာရှိတဲ့ ရဲတွေက နံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ထိုးတယ်။ နောက်ထပ်ရဲတွေက နံပါတ်တွေနဲ့ ဝင်ရိုက်တာပဲ။ ကျွန်မတို့လည်းမခံနိုင်လို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကို ဝင်ပြေးတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကို ဝင်ဖမ်းတော့ ပထမက ဘာမှမလုပ်ဘူး ကတိပေးလို့ ကျွန်မတို့ အပြင်ထွက်တယ်။ ကျွန်မတို့ကို တစ်ယောက်ကို ရဲအယောက် ၂ဝ လောက်က နံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ ကောင်မတွေ ထွက်လာမလား။ မလာဘူးလား။ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း လူတစ်ယောက်ပါးစပ်နဲ့ မတန်အောင်ကို ပြောဆိုတယ်။ မိန်းကလေးတွေကို တန်းစီပြီးရိုက်တယ်။ ခေါင်းမော့ကြည့်ရင်လည်း ကောင်မတွေ ညည်းတို့က ဘာကောင်မတွေလဲ ပြောပြီး ရဲမေတွေက ရိုက်တယ်။ ရဲသားတွေက ယောက်ျားလေးတွေကိုလည်း အဆက်မပြတ် ရိုက်တယ်။ အကောင်တွေ၊ ကောင်မတွေ နင်တို့ကို ရိုက်သတ်ချင်နေတာ။ ပုံစံထိုင်ခိုင်း အချိန်နည်းနည်းလေး ဒူးထောက်မိတာနဲ့ ကောင်မတွေ ငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးလားဆိုပြီး နံပါတ်တုတ်နဲ့ ရိုက်တယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာတောင် လူနဲ့မတန်တဲ့ စကားတွေ ပိုဆို ပက်စက်ပြောတယ်။ နင်တို့က ပညာတတ်တွေ မဟုတ်ဘူး။ အောက်တန်းစားမတွေလို့ ပြောတယ်။ အဲဒီရဲတပ်ရင်း ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၁ ကို ဘယ်တော့မှ မကျေဘူး” ဟု ဆိုသည်။
ဖမ်းဆီးခံထားရသော ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် အချုပ်သား အဖြစ်သာရှိနေသေးပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရိုက်နှက်မှုများပြုလု
ဦးကြောင်ကြီး says: ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၁
လက်ပံတန်းမြို့တွင် တားဆီးပိတ်ဆို့ခြင်း ခံထားရသည့် ဒီမိုကရေစီပညာရေး သပိတ်စစ်ကြောင်း အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခံရစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရိုက်နှက် ကန်ကျောက်ခဲ့မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများအား ကုသပေးနေသည့် ကြက်ခြေနီယာဉ်အား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက နံပါတ်တုတ်များဖြင့် ရိုက်၍ အတွင်းရှိ လူနာများကိုပါ ရိုက်နှက်ကာ ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ယာဉ်ပေါ်ရှိ အရေးပေါ်တာဝန်ခံ ကိုဉာဏ်ထွန်းက မတ်(၁၁) ရက်တွင် မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လက်ပံတန်း အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခံရမှုတွင် ဒဏ်ရာရ လူနာများအား ကျောင်းသားသပိတ် စစ်ကြောင်းကို အကူအညီ ပေးနေသည့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ကြက်ခြေနီယာဉ်ပေါ်တွင် ကုသမှုပေးနေစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက လူနာတင် ကြက်ခြေနီယာဉ်အား ထုရိုက်ပြီး ယာဉ်ထဲမှ လူနာအချို့အား ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
““သူတို့ ကျောင်းသားတွေကို လိုက်ရိုက်တော့ ကျောင်းသားတွေ နောက်ကို ဓာတ်တိုင် ၂ တိုင်စာလောက် ဆုတ်သွားတယ်။ မိတဲ့သူကို ဒယဉ့်တိုက်ပြီး ဆွဲခေါ်သွားတာ။ ကားတစ်စီးကလည်း လူနာတွေ သွားပို့နေတော့ ကျွန်တော်တို့ ကားပေါ်မှာ လူ(၇)ယောက် (၈) ယောက်လောက်ရှိ တယ်။ ဆေးကုသမှု ခံယူနေတာ။ အဲဒီ ကျောင်းသားတွေနောက် လိုက်သွားတဲ့ရဲတွေ ကျွန်တော်တို့ လူနာတင်ကားနားကို ပြန်ရောက်တော့ ရဲတစ်ယောက်က မင်းတို့လည်းပါတယ် မဟုတ်လား ဆိုပြီးတော့ လူနာတွေကို ရိုက်တယ် ခဲနဲ့ပစ်တယ်။ ဒဏ်ရာ ရတဲ့သူတွေကို ထပ်ပြီးတော့ နာကျင်အောင် ပြုလုပ်တယ်။ လူနာတွေကို ချခိုင်းတာ ကျွန်တော်တို့က လူနာတွေမို့ ချပေးလို့မရဘူး ပြောတော့ ရဲတပ်သားတစ်ယောက်ကနေ ကားဘော်ဒီကို ရိုက်လိုက်တယ်။ နောက်ထပ်ရိုက်ပြီး ကားရှေ့မှန်ကို ရိုက်တာမကွဲဘူး။ နောက် ကြည့်မှန်တော့ ကွဲသွားတယ်။ တချို့ လူနာတွေ ကိုလည်း ဆွဲခေါ်သွားတယ်””ဟု နာရေးကူညီမှုအသင်း ကြက်ခြေနီယာဉ် အရေးပေါ်တာဝန်ခံ ကိုဉာဏ်ထွန်းက မြန်မာ သံတော်ဆင့် သို့ ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ လက်ပံတန်းသပိတ်စခန်း အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခံရသူဖြစ်စဉ် တွင် ကျောင်းသား ၅၂ဦး၊ ကျောင်းသူ ၁၃ ဦး၊ အရပ်သူအရပ်သား ၆၂ ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး အချို့မှာ ဒဏ်ရာများရရှိပြီး လက်ပံတန်း ဆေးရုံကြီး ၌ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ““လူနာကို ဆွဲတယ်။ လူနာကိုဆွဲတော့ ၀န်ထမ်းတွေက အဆွဲမခံဘူး။ ကားကို ရိုက်တယ်။ ကားထဲကို ခဲနဲ့ပစ်တယ်။ လူစိတ်ပျောက်နေတယ်။ ဗြဟ္မစိုရ်တရားတွေ ပျောက်နေတယ်။ ဒီလို အကြမ်းဖက်တာကတော့ မလုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ”” ဟု နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူ က မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကြက်ခြေနီယာဉ်အား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက တစ်စုံတစ်ရာ သတင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိပေ။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်က ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရ လောက်ကိုင် ဒေသတွင် မြန်မာ့ တပ်မတော်နှင့် ဖုန်ကြားရှင်၏ တပ်ဖွဲ့များအကြား တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားစဉ် ကယ်ဆယ်ရေး ကြက်ခြေနီယာဉ် တန်း တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ ကျင့်ထုံးများအရ စစ်ဖြစ်နေသည့် အရပ်ဒေသများ၌ ကြက်ခြေနီယာဉ်အား တိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုရန် တားမြစ်ထားသည်။
Courage says: အဖမ်းစီးခံ ကျောင်းသားတွေကို နှိတ်စက်တာ လုံးဝလက်မခံဘူး။ တစ်ခုရှိတာက အခုချိန်မှာ သူတို့ဟာ ပုဒ်မ ၅၀၅ နိုင်ငံတော် အစိုးရ(သို့) နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝမ်ပိပြားရေးကို ထိခိုက်သည့်ပြစ်မှု ကို ကြူးလွန်ထားသူတွေဖြစ်တယ် ဆိုတာပါ။ ဖမ်းစီးခံတွေကို ရဲတွေနှိတ်စက်တယ်ဆိုတာ သူတို့မှ မဟုတ် အဖမ်းခံအားလုံးကိုပါ။ ဘာအမှုနဲ့ဝင်ဝင် ရဲတွေက နွှာတာထုံစံပါ။ ဒီတော့ နှိတ်စက်တယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မလုပ်ဖို့တားရင်း ကျောင်းသားသာမက အခြား သူတွေအတွက်ပါတောင်းဆိုပေးမှ ပိုတရားမယ်ထင်တယ်။
ပြန်ထွက်လာသူတွေရဲ့စကားတွေ ကြားရတော့ အမုန်းတရားတွေ များနေတယ် ထင်မိပါတယ်။ မုန်းသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ နောင်တချိန် ကျောင်းသားတွေကို ဦးဆောင်မယ့်သူတွေ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ဒီလို အမုန်းတရားတွေပြည့်နေသမျှ အခုလို ဖြစ်ရပ်တွေ ဆက်ရှိနေဦးမှာ တွေးမိပြီး ရင်လေးမိပါတယ်။
မွသဲ ( 17082011 ) says: မုန်းလဲမမုန်းဘူး ဆဲလဲမဆဲဘူး။ အပြည့်အဝထောက်ခံတယ်။ ဒီစကားတွေကိုဒီလိုပြောခဲ့ပေါင်းများပြီ။ ဒါပေမဲ့ ထောက်ခံသူ အားပေးသူတွေရဲ့စကားသံတွေကြားမှာ ကိုယ့်အယူအဆကပျောက်ပျောက်သွားခဲ့တယ်။ အတိုက်အခံပြောတော့လဲ ဘောမတယ်ပြောခံရတယ်။ မငြင်းချင်တော့လို့ ငြိမ်နေတော့လဲ တတိယအုစုပ်ဆိုပီးအစော်ကားခံရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘာမှမပြောပဲ အေးရာအေးကြောင်းပဲနေတော့တယ်။ အမေစုတောင် ပါးစပ်ပိတ်နေမှတော့ သူတို့အဆို တတိယအုစုပ်ထဲပါနေမင့်တော့ ကိုယ်တွေလဲ အမေစုနောက်ကနေရပ်နေရန်မှတပါးအခြားမရှိပါဘူး။ ဒီပိုစ့်ကိုတော့ အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်။ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
Courage says: ကျေးဇူးပါ။ ၀န်ခံရရင် ကျွန်တော့ ဒီအမြင်ကို အပြင်လူနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ တစ်ကယ်ကြောက်ခဲ့တာပါ။ ခုချိန်မှာ အစွန်းရောက်သူတွေထက် အန်တီမွသဲပြောတဲ့ တတိယ အုပ်စုက လူတွေက ပိုပြီးလူမုန်းများနေလို့ပါ။
မွသဲ ( 17082011 ) says: နားမလည်နိုင်တာအဲ့ဒါဘဲ ကျောင်းသားသပိတ်ကိုမထောက်ခံဘူး။ ကလော်တုတ်ခံရတယ်။ သူတို့ထောက်ခံတာကျတော့ ကိုယ်တွေလက်ခံပေးလို့ရတယ်။ ကိုယ်တွေမထောက်ခံတာကိုကျတော့ ဘာလို့လက်ခံမပေးနိုင်ကြတာလဲ။ အမေစုတောင်လက်ရှောင်ထာူတဲ့ပြသနာကို ဒီသူတို့အဆို တတိယအုပ်စုကကော လက်ရှောင်ခွင့်မရှိဘူးလား။ ဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ် တွင်တွင်အော်နေတဲ့ ဒီမိုဆိုတဲ့သူတွေ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဒီလိုသဘောထားကွဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာလောက် နားလည်လက်ခံမပေးနိုင်ပဲ ဒီမိုဘက်တော်သားလို့အော်နေတာဟာ မဖြစ်သင့်ဘူး။ သူတို့ဟာ ဒီအစိုးရနဲ့မခြားတဖက်ပိတ်တွေ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ သူတို့ကိုယ်တိုင် သတိမထားမိလေသလား
Alinsett@Maung Thura says: တရားဥပဒေအရ အကိုက်ခံရတာ
Courage says: အကိုက်ခံရတဲ့သူတွေမှာ အမာရွတ်မကျန်ဖို့နဲ့ ကိုက်လိုက်တဲ့ သွားမှာလဲ အနာမဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းပါတယ်
naywoon ni says: ကျုပ်​က​တော့ ​ထောက်​ခံတဲ့ အထဲမပါဘူး ။ ဒါ​ပေမဲ့ အဖြစ်​မှန်​ကိုလက်​ခံတယ်​ ။ ဖြစ်​သင့်​ဖြစ်​ထိုက်​တာ အချိန်​အား​လျောစွာ ဖြစ်​လာတဲ့ အဖြစ်​တစ်​ခုလို့ လက်​ခံတယ်​ ။ ပြီး​တော့ ပြုပြင်​​ပြောင်းလဲ မှုကိုလိုလားတဲ့သူဆို​တော့ အသာပဲကြည့်​​နေမိတာပဲ။ အဲ့ ရွာထဲမှာ​တော့ မ​နေနိုင်​လ်ု့ ၀င်​​ပြောမ်ိ​သေး ။ ” ထုံးတမ်းစဉ်​လာဖက်​တွယ်​ထားသူနဲ့ ဓ​လေ့ထုံးတမ်းစဉ်​လာ ငြီး​ငွေ့သူတို့ရဲ့ တိုက်​ပွဲ က စပြီလို့ ” ဖြစ်​စဉ်​တစ်​ခုလုံးကို လူမှု ​တော်​လှန်​​ရေး တစ်​ရပ်​အ​နေနဲ့ ပဲ မြင်​တယ်​ ။ ​နောက်​လဲ ဆက်​ဖြစ်​​နေဦးမှာပဲ လူမ​ပြောင်းပဲ မူ​ပြောင်းချင်​​ယောင်​​ဆောင်​တာကိုး
Courage says: ဟုတ်ပါတယ် ပြောင်းလို့ရတာကို ပြောင်းပြီး လဲမှဖြစ်မှာကို လဲသင့်နေပါပြီ။
ဦးဇာဂနာရဲ့ သံချပ်လေးကိုတောင် သွားသတိရမိရဲ့ အဘနီရေ့။
“ခံယူချက်ကကောင်းပါတယ် မကောင်းတာကလူ” ဆိုတာလေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: ထုံးတမ်းစဉ်လာကိုဖက်တွယ်ထားတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ လပိုင်းလောက်ကလေးပဲကျန်တော့တဲ့ ကာလမှာ အမေ့စုလက်ထဲကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ပုံအပ်ထားလိုက်ချင်တာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲနောက်မှ သူတို့ညစ်တယ်ဆိုရင် လမ်းပေါ်ထွက်လို့ သူသေကိုယ်သေ ချဖို့လဲဝန်မလေးပါဘူး။ ခုဟာက အမေစုလုပ်ရကိုင်ရမကျပ်အောင် ခဏလေးစောင့်စေချင်တာပါ
Ma Ma says: ဒေါ်လေးမြရေးတဲ့ မှားတဲ့ဖက်မှာ ကိုယ်လည်းပါတယ်။
ခုလည်း လူမုန်းခံရမယ့်ဘက်မှာ ကိုယ်လည်းနေချင်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: ကျေးဇူးပါ မမ
Courage says: ကိုတောင်ပေါ်သားရေ ရှဲရှဲ
padonmar says: တူတူ အမုန်းခံပါမည်။
စိတ်ပျက်နေသော ၇၀ % ထဲပါပါသည်။
Crystalline says: တီဒုံနဲ့မမကို… ​ဘောဒီဂတ်​လုပ်​​ပေးမယ်​.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: အယ် အယ်
Courage says: တီတီ ပဒုမ္မာပါ ပါရင် အင်းအားတွေ တိုးလာပြီဗျိ့။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အစိုးရကိုဆဲရင်ဆဲ ၊မဆဲရင်ကျောင်းသားကိုဆဲ
ဘလိုင်းကြီး လာပုတ်ခတ် အန် ပစ် ၇ုံပဲ ။
Courage says: ဦးဆောင်ဦးလှိုင်ကို သွားပြောဦးမယ်။ စာသားပြောင်းရေးပေးပါလို့
ဘေးထွက်ထိုင်သူကို လာကာအော်တယ်” ဆိုပြီတော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ​နေရာရှိ​သေးတယ်​မလား
Courage says: လေးလေးမာဃအတွက်ဆို Roll-A, mid seat ချန်ထားပါတယ်
အောင် မိုးသူ says: ကျတော်လည်း လူမုန့်းခံချင်တယ်လို့။